Iwo gumi akanakisa mabhuku evechidiki ekuti ubate pakuverenga | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku gumi akanyanya kukurudzirwa kune vechidiki kuti vabate pakuverenga
Lola curiel | | Updated on 08/07/2021 10:08 | Vechidiki Mabhuku, dzakawanda
Kuverenga tsika yakanaka, inotibatsira kufunga zvine hungwaru, inotidzidzisa kutaura zvirinani, uye inovandudza kugona kwedu kuongorora uye kunzwisisa. Kubva zvatakatanga kukura, vabereki, vadzidzisi, uye nhengo dzemhuri vakaedza kudzidzisa matiri kukosha kwekuverenga. Nekudaro, vechidiki vazhinji vanoverenga kunze kwekusungirwa uye vanokundikana kukoshesa kukosha kwechokwadi kwemabhuku. Kana iwe uchinetseka kuverenga, hazvireve kuti uri akaipa kuverenga, uye haikupi mhosva kuti usatombokwanisa kunakidzwa nebhuku rakanaka. Zvichida chete chinhu chinoitika kwauri ndechekuti hausati wawana kuti uri muverengi akaita sei kana kuti hauna kusvika pakuverenga nenzira kwayo (nechido uye kwete nungo). Asi ... Une mhanza! Kunyangwe zvisina kumbononoka kunonoka Vechidiki inhanho inoyevedza yekutanga mumufaro iwoyo uye kuti uzive zvauri iwe semuverengi.
Kune mabhiriyoni emabhuku akasiyana munyika.Iwe unonyatsofunga here kuti hapana rimwe richakwanisa kukugonesa? Kuedza marudzi akasiyana siyana uye masitayera uye kutsvaga mabhuku evechidiki anokukochekera inzira yakanaka yekupinda mukuverenga. Ndinoda kugovana newe rondedzero yangu yegumi mabhuku akakurudzirwa evechidiki, kuti ugone kukurudzirwa uye uvake yako. Kana iwe uchitova inveterate muverengi uye iwe uri pano chete pakutsvaga kwemabhuku matsva aunogona kudya, ndinovimba iwe unowana ichi chinyorwa chinowirirana zvakaenzana.
1 Zvitete zvinobhururuka pakuvira kwezuva
2 Mubati mune rye
3 Kirabhu yeVasina Kunzwisiswa
4 Vakomana vanoita kuchema
5 Vakadzi vadiki
6 Chitoro chakavanzika
7 Nhau dzeGoodnight dzeVapanduki Vasikana: 100 Nyaya dzevakadzi Vanoshamisa
8 1775 migwagwa
9 Nhetembo anthology
10 Mukadzi neshato
Zvitete zvinobhururuka pakuvira kwezuva
Beetles vanobhururuka kuenda ku ...
Ndasarudza bhuku iri pamusoro pechinyorwa nekuti nderimwe rekutanga rakandibata, kusvika pakupedza husiku hwese ndichiverenga netochi pasi pegumbeze. Iri junior runyorwa nemunyori weSweden Maria Gripe ndiyo tsananguro yekufungidzira nehushumiri. Iri bhuku harisi idzva, nekupesana, rakaburitswa muna 1978 uye harina kusvika kuSpain kusvika 1983. Zvisinei, nyaya yacho haina nguva zvachose uye nhasi, makore makumi mana nemasere gare gare, ndinokuvimbisai kuti basa iri richapenya chaizvo uye kuvaraidza semukomana wekutanga akaiverenga.
Munyori anotaurira nyaya yevechidiki vatatu vanozvipira kutarisira zvirimwa mumba munguva yezhizha.Hazvitaridzike kunge zvinonakidza, handiti? Ndiko nekuti iwe haugone kufungidzira huwandu hwezvakavanzika zvinogadziriswa zvakavanzwa mukati memadziro eimba iyoyo. Izvo zvinotanga sebasa rezhizha zvinoshanduka kuita nyaya izere enigmas kupi kunyengera kunovimbiswa. Ndine urombo, handichazokupi zvimwe zvichemo! Kana iwe uchida kuziva zvakawanda, iwe uchafanirwa kuti uverenge iwe pachako.
Mubati mune rye
Muchengeti pakati pe ...
Iri bhuku harisi razvino kana, asi iyo ndeimwe yeaya echinyakare auri kuenda kuverenga munguva pfupi, saka inogona kunge isipo pakati pezvakakurudzirwa. Hongu ndinofanira kureurura kuti ino novel haigone kukunda munhu wese. Munyori waro, JD Salinger aive murume chaiye uye izvi zvinogona kuonekwa mumabasa ake. Ane chimiro chake chaicho uye nhoroondo dzake dzine kumwe kubata.
Munguva yayo, yakaburitswa muna 1951, Mubati mune rye Yakanga ine gakava kwazvo nekuda kwehutsinye hwahunobata nenyaya dzinogona kukakavara, senge dzepabonde kana kudheerera mukuyaruka. Nekudaro, uye kunyangwe panjodzi yekuti iwe ungasazvifarire, iwe unofanirwa kubhurawuza iri basa nekuti rakasiyana neyakajairika enhau dzevechidiki. Kubata zvine mutsindo uko vamwe vanako, kunonyangarika apa. Holden, protagonist, achiri kuyaruka ari kupfuura kuva munhu mukuru uye, mubhuku, inorondedzera zvaunofunga uye manzwiro nehupamhi hwechokwadi. Mutauro, matauriro, zvese zvinotiza mune zvematongerwo enyika.
Kirabhu yeVasina Kunzwisiswa
Iyo Kirabhu ye ...
Kirabhu yeVasina Kunzwisiswa ndeye trilogy yenyaya dzerudo yakanyorwa nemunyori weSevillian, Francisco de Paula Fernández, uyo anosaina nepseudonym "Blue Jeans". Nhoroondo idzi dzinotaura nyaya dzeboka revamwe shamwari vanoumba "Iyo Kirabhu yeVasina Kunzwisiswa."
Iwo mabhuku anoumba trilogy ndiwo mufananidzo wezvinonetsa nematambudziko atakatarisana nawo muhudiki hwedu. Rudo, ushamwari, mhuri, godo, mufaro, kuora mwoyo ...Munyori anotora kutenderera kwemakona ese emoyo wechidiki, inonakidza kunyangwe avo vakapfuura nhanho iyoyo kwenguva refu.
Blue Jeans ine kugona kuzviisa munzvimbo yevechidiki, ichitaura, kubva mungano, nyaya dzakakosha chaizvo pamazera iwayo uye zvinoita saizvozvo nechokwadi chikuru. Chokwadi ichocho, chinoita kuti uzive nezvevanyori, ndizvo zvakaita kuti ndione basa rake seimwe yeakanyanya kuratidza kukura kwangu. Mavara acho ndeechokwadi zvekuti unotambura, kuchema, kuseka, kuwira murudo uye, pakupedzisira, kunzwa navo. Kana munyori achinge awana izvozvo, haugone kubvisa maziso ako pamabhuku ake.
Vakomana vanoita kuchema
Vakomana vanochema ...
Iwe haudi here nyaya dzerudo nekuti iwe unonzwa kunge vese vanotevedzera maitiro akafanana? Ndinokuvimbisa, kunyangwe kana usiri fan of novels dzerudo, iri bhuku raLeah Konen richakushamisa iwe. Iyo inogona, mukukosha, kuve yakajairika nyaya yerudo, asi ndine chokwadi chekuti hauna kumbobvira waverenga imwe nyaya yerudo yakataurwa nerudo pachayo.
Chokwadi, mune ino nyaya murondedzero rudo, runo fambidzana nekusuwa, kusadzora manzwiro, kusagadzikana, kusagadzikana kwepfungwa uye ,zve, kupwanya kwemukomana uyo, senge chero wechidiki, anotarisana nehukama hwake hwekutanga hwakavhiringidzika. Iyi nzira nyowani inoshandura iyo "yakajairika" nyaya yerudo kuita basa rekugadzira., manzwiro uye kufamba.
Vakadzi vadiki (Unganidzo ...
Iyo yekupedzisira classic yemakirasiki ayo ini andichasanganisira mune ino runyorwa rwegumi evadiki mabhuku kuti vabatwe nekuverenga ndiko Vakadzi vadiki. Ruzivo rwaLouisa May Alcott runotevera hupenyu hwehanzvadzi ina dzakagara naamai vadzo kuNew England panguva yeAmerican Civil War. Kunyangwe iri runyorwa rwevechidiki runobata nemadimikira seanodzokororwa serudo, hushamwari kana mhuri, Vakadzi vadiki ine chinhu chakakosha chakakosha. Mavara echikadzi anotamba mune ino nyaya yevakadzi vanotaurwa nevakadzi vanogara uye vane zvishuwo zvinopfuura chimiro chemurume. Zvinogona kutaridzika kunge zvakajairika izvozvi, asi kuisa tarisiro kuvakadzi uye kuvaratidza nenzira yaMay Alcott anovaratidza, muna 1868 zvaive zvisiri zvechinyakare. Kubudikidza nehunhu hwaJo Kurume, imwe nzira yechikadzi kune iyo stereotype yenguva inoratidzwa. Hanzvadzi yechipiri mumhuri ndeyekuenzanisirwa kwemazano emunyori wayo, mudziviriri akatendeka wechikoro chevakadzi.
Asi kupfuura kukosha kwayo kwakakosha, ino nganonyorwa ibasa chairo rehunyanzvi. Rudo rwunoratidzwa nehanzvadzi, musiyano uripo pakati pezviitiko zvinosuwisa uye kutsva, mufaro uye kushinga kwavanogara nazvo, inoita iyi nyaya dhaimani rakaringana rinozoita kuti ucheme, useke uye, pakupedzisira, unzwe.
Chitoro Chakavanzika: ...
Ini ndaisakwanisa kumira kusanganisira anonakidza pane ino runyorwa. Ini ndakakura ndichiverenga Agatha Christie naArthur Conan Doyle, saka ndine hutera hwakakosha pamatsotsi enhau uye kune avo vese vane zvinyonganiso nezvakavanzika. Chitoro chakavanzika naEugenio Prados ine zvese izvo zvigadzirwa. Nemhondi yekugadzirisa uye nemutero wakanaka wezvakavanzika nemibvunzo, ino nhoroondo inokubata pane peji rega rega. Mubhuku, musikana ane makore 19 anowana chitunha chababa vake muFrance, mushure memakore ekutenda kuti akamusiya. Mukadzi mudiki achaferefeta nezvekufa kwake, basa rake, mazuva ake ekupedzisira otanga rwendo rurefu maanobvunza kuti baba vake vaive ani uye kuti ndiani. Kana iwe usingakwanise kuramba chirahwe chakanaka, wakamirirei? Iyi novel inokunakidza.
Nhau dzakanaka dzevasikana vanopandukira: 100 nyaya dzevakadzi vanoshamisa
Nhau dzakanaka dzehusiku ...
Dzimwe nguva chikonzero chedu chekusaverenga, uye ini ndoti chedu nekuti zvinoitika kwandiri futi, kushaya nguva. Zvinogona kuve zvakaoma, kunyanya kana usiri pazororo, kutanga bhuku uye usariisire hafu kuti utange kudzidza. Paunodzokera kwazviri, iwe haucharangarira chero chinhu uye iwe unofanirwa kudzokera kumashure uye kuongorora pakutanga. Mapfupi nyaya anopedza dambudziko iri. Kune akawanda mabhuku ari kuunganidzwa kwenyaya pfupi, dzaunogona kuverenga pasina nguva. uye zvisinei nehurongwa.
Nhau dzeGoodnight dzeVapanduki Vasikana: 100 Nyaya dzevakadzi Vanoshamisa, inounganidza nyaya dzine vakadzi chaivo izvo zvinonakidza uye zviri nyore kuverenga. Rondedzero yehupenyu hwavo, zvavakaita uye nyaya dzavo dzekukunda dzichakukunda uye nekukuzivisa iwe mienzaniso zana yevakadzi vanga vakakosha munhoroondo. Nekudaro, kana kuverenga inoverengeka refu isiri chikamu chehurongwa hwako izvozvi, ichi chingave chisarudzo chakakura kutora mukana wenguva yako yemahara.
1775 migwagwa (Unganidzo ...
Nhetembo muenzi mukuru kune vechidiki vazhinji, uye zvakadaro iri mhando inogona kutibatsira kuziva nekutaura manzwiro atinoita. 1775 migwagwa, iri pakati pechirevo nhetembo. Iri bhuku, naOffreds, rinosanganisira nhetembo 1775 dzinotsanangura rudo nekuchipa zita remigwagwa 1775 yeVigo. Nemavara akanyanya emanzwiro, iri basa zvine hungwaru rinoongorora manzwiro uye nemanzwiro aripo chaizvo muhudiki. Kana iwe uchingotanga kubuda munhetembo, bhuku iri harisi rakaipa danho rekutanga.
Nhetembo Anthology (Iyo ...
Mario Benedetti munyori weUruguay uyo anokwanisa kudanana nemaitiro ake echisikigo, asina hunyanzvi hwakawanda, mutauro wake wekutaura uye kuseka kwake. Aya maitiro haaite kuti mabasa ake asadzike, asi anoaita Vakakodzera kukwikwidza kuunza vechidiki padyo nenhetembo. Nhetembo Anthology Ndicho muunganidzwa wenhetembo dzakaitwa nemunyori mumwe chete uye muenzaniso wakakwana webasa rake uye nzira yake yekunyora. Mavhesi ake ematimu akasiyana siyana, asi marwo rudo rwunoitisa chinzvimbo chinotungamira, chinoita kuti iwe unakirwe nerwiyo genre uye, zvechokwadi, vanokufambisa.
Mukadzi uye dhiragoni ...
Ray de Bradbury, munyori we Martian MakoronikeIye akati: "iwe unofanirwa kubaya fungidziro kuti usazofa zvechokwadi," uye ini ndinobvumirana zvizere. Neichi chikonzero, uye kunyangwe ini ndichibvuma kuti handiro randinofarira genre, nguva nenguva ini ndinoda kufudza fungidziro yangu nebhuku rakanaka resaenzi ngano kana imwe yekufungidzira novel. Mukadzi neDhiragoni, anga ari mukuru akasarudzwa kuvhara urwu runyorwa rwegumi mabhuku akakurudzirwa kune vechidiki. Ndine chokwadi nazvo iyi yekufungidzira nyaya ichaita kuti iwe ubate. Munyori waro, Gema Bonnín, akatanga kuinyora aine makore gumi nemashanu chete.Ndiani ari nani pane wechidiki kuti atore mwoyo yevechidiki?
Iyo inoverengeka inotaurira nyaya yaErika, musikana asinganzwisisike wechidiki akazova Mukadzi weDhiragoni, rinenge gamba guru rinodzivirira ruramisiro pamusoro pekusarura. Mubhuku, mudziviriri wemadhigoni achasangana nesarudzo yakakosha: chengetedza hunhu hwake chakavanzika uye kurasikirwa nerudo rwehupenyu hwake kana kusiya naye oburitsa zvaari chaizvo. Kunyangwe ichiitika mune yekufungidzira nyika, iro zano rakatakurwa nemitengo uye kushoropodzwa munharaunda izvo zvinoshanda kuchokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku gumi akanyanya kukurudzirwa kune vechidiki kuti vabate pakuverenga
Gustavo Woltman akadaro
Rondedzero isinganzwisisike, ini ndakave nemukana wekuverenga iyo Catcher muRye uye iri inonakidza novel. Ndichatarisa "Beetles Fly pa Sunset", yakandibata.
Pindura kuna Gustavo Woltmann
Kusarudzwa kwevana nevechidiki zvinyorwa zvaDecember